Oke Arctic: njirimara, ihu igwe, flora, fauna na ọnọdụ ugbu a | Netwọk Mgbasa Ozi
Oke Osimiri Arctic
N'etiti oké osimiri nke ụwa, Oke Osimiri Arctic ọ bụ ya bụ mmiri kacha nta na ebe ugwu. A na-ahụkwa ya dịka oke osimiri kachasị oyi na mbara ala anyị ebe ọ bụ na nnukwu mmiri jupụtara na mmiri ya ọtụtụ afọ. N'ime ya bụ ndụ a na-emegharị maka ọnọdụ ọjọọ ndị a nke ihu igwe oyi. Agbanyeghị, ọ bụ otu n'ime oke osimiri kachasị emetụta mmetụta ọjọọ nke mgbanwe ihu igwe na okpomoku ụwa.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, mmalite, ahịhịa na ahịhịa nke Osimiri Arctic.
2 Nhazi na ihu igwe nke oke osimiri Arctic
3 Ifuru na anumanu nke oke osimiri Arctic
4 Ọnọdụ dị ugbu a
Isi ihe dị iche ọ nwere na Oke Osimiri Antartic bụ na o nwere shelf kọntinent nke ice dị na ya. N'ihe banyere agbaze nke ice na-aga n'ihu na ọnụego a, ọ ga-abụ South Pole nke na-eme ka oke osimiri dị elu. Oke Osimiri Arctic enweghi elu ala, ma obu mmiri oyi. Nke a na eme ka mkpọmkpọ friji na-ese n’elu mmiri dị n’etiti. Oké osimiri ndị a gbara gburugburu nnukwu osimiri a n'oge ọkọchị na udu mmiri, Dị ka mmiri na-ajụ oyi, ọkpụrụkpụ ya ga-eto.
Ọ dị na ugwu ugwu na mpaghara kacha nso Arctic Circle. Ọ ókè na mpaghara ndị dị nso Asia, Europe na North America. Soro ya soro ya gafee osimiri atlantic site na Strait of Fram na Osimiri Barents. O nwekwara oke osimiri Oké Osimiri Pasifik site na Bering Strait na akụkụ osimiri nile nke Alaska, Canada, Northern Europe, na Russia.
Nhazi na ihu igwe nke oke osimiri Arctic
Agbanyeghi na amataghi nguzobe nke oke osimiri a, echere na o guzobere ogologo oge gara aga. Enwere ọnọdụ gburugburu ebe obibi na-eme ka ọmụmụ nke oké osimiri a sie ike. Ndị Eskimo bi na ya ihe dịka afọ 20.000. Ndị a enweela ike ime mgbanwe maka oke ihu igwe ihu igwe dị na ebe ndị a. Site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ ha enweela ike ịfefe ihe ọmụma dị mkpa iji nwee ike imeghari ma mee ka ibi ndụ na ebe ndị a mara ha.
A hụrụ n’ime mmiri a nke nwere ihe ndị gosiri na ọ bụ ihe ndị dị ndụ nke mebere kpamkpam. A na-eme atụmatụ na ọ na-eme ihe dị ka ihe dịka nde 70 afọ gara aga o nwere otu ọnọdụ ahụ Oke Osimiri Mediterenian nwere taa. Ma ọ bụ na n'oge ụfọdụ na oge nke geological oge achọpụtala oke osimiri a n’enweghi ice ọ bula.
Nkezi okpomọkụ n'oge oyi na nke a oké osimiri dobe ka ụkpụrụ nke -50 degrees, nke na-eme lanarị ebe a bụ odyssey. Ọnọdụ polar bụ otu n'ime ụwa kachasị oyi na mbara ala, nke na-eme ka ọ nwee ike ịnagide ma ọ bụ obere oge okpomọkụ kwa afọ. A na-ekekarị ya na oge abụọ nke ihe dịka ọnwa isii ọ bụla. Anyị ga-enyocha ọdụ abụọ dị na Arctic Ocean:
Ezumike: N’oge ọnwa ọkọchị, okpomoku na -ejupụta ihe dị ka ogo 0 wee bụrụ ìhè na-aga n’ihu site n’anyanwụ ruo awa iri abụọ na anọ n’ụbọchị. A na-enwekwa nkịta ndị na-aga n'ihu na snowy na-egbochi ice ịgbaze kpamkpam. Site n'oge ọkọchị enwere kwa cyclon na-adịghị ike na mmiri ozuzo ma ọ bụ snow.
Oge oyi: okpomọkụ na-eru ụkpụrụ nke -50 ogo ma enwere abalị na-adịgide adịgide. N’oge a n’afọ, a naghị ahụ anwụ n’oge ọbụla. Eluigwe doro anya ma ihu igwe dị mma. Nke a bụ n'ihi na enweghị mmetụ sitere na ìhè anyanwụ.
Anyị enweghị ike ichefu na isi ihe kpatara ọnọdụ ihu igwe ji adị bụ maka ọrụ nke anwụ. Ya mere, n'oge oge oyi, enwere ọnọdụ ihu igwe siri ike. N'ihi mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na okpomoku zuru ụwa ọnụ, ọnọdụ okpomọkụ nke ọnwa oge okpomọkụ na-arịwanye elu, na-eme ka agbaze kpamkpam Oké Osimiri Arctic dum.
Ifuru na anumanu nke oke osimiri Arctic
N’agbanyeghi na oke osimiri a no n’ime oke onodu, onwere otutu anumanu anakpo ebe ndi a. Ọtụtụ n’ime ha nwere ajị anụ na-acha ọcha nke na-eje ozi dị ka ozuzo na nchebe megide oyi. I nwere ike ịgụ ma ọ bụ pekarịa ihe dị ka ụdị ụmụ anụmanụ 400 ma na-emegharị maka oke oyi nke mpaghara a. N'etiti ndị kacha mara amara anyị nwere ụdị ahịhịa nke 6 na ọdụm n'oké osimiri, whale nke ụdị dị iche iche na anụ ọhịa pola, ịbụ onye amara nke ọma.
E nwekwara microscopic mollusks a maara dị ka krill nke na-arụ ọrụ dị oke mkpa na pyramid obibi obibi. Ahịhịa dị ụkọ, ọ bụ obere mosa na lichen mejupụtara ya.
Akụkụ ice ndị na-akpụ n’Oké Osimiri Arctic bụ nnukwu igwe jụrụ oyi. Mmiri na-abụghị mmiri na-eto okpukpu abụọ n'ogo n'oge oge oyi ma mmiri oyi na-agba ha gburugburu n'oge ọkọchị. Ihe mkpuchi ndị a na-erukarị ihe dịka 2 na 3 mita ha na-ebugharị mgbe niile site na mmiri na ifufe na-esite na Siberia. Anyị nwere ike mechaa hụ ụfọdụ ice kịkọrọ ga na-adakọrịta onwe ha ma jikọọ kpamkpam. Nke a na - eme ugo nke ihe kariri okpukpu ato ka okpukpu okpukpu ya mebere.
Enwere ike ịsị na nnu nnu nke oke osimiri a bụ nke dịkarịsịrị elu na mbara ụwa niile. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na evaporation dị oke ala ma gbazee mmiri, nke dị ụtọ, na-emetụta ya.
Ọnọdụ dị ugbu a
A na-eme atụmatụ na n'oké osimiri a 25% nke mmanụ ala, gas gas, tin, manganese, ọla edo, nickel, lead na platinum dị n'ụwa niile. Nke a pụtara na gbazee na-enye ohere ịnweta akụ ndị a dị ka ike na ụzọ aghụghọ nke dị mkpa maka ọdịnihu. Oké osimiri a bụ nnukwu mmiri dị na mmiri n'ụwa. Agbaze ya na-akpata ọnwụ ya dị nso.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Arctic Ocean.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Arctic
Gịnị bụ runoff